(Warbixin Cusub): Maxaa ka jira In Axmed Macalin Fiqi uu noqon doono Madaxweynaha Maamulka Galmudug | AllJubbalandnews
(Warbixin Cusub): Maxaa ka jira In Axmed Macalin Fiqi uu noqon doono Madaxweynaha Maamulka Galmudug
Warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in Axmed Macalin Fiqi, uu ku biiray liiska Musharixiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Maamuka Galmudug .
Sababta Xildhibaan Fiqi uu ugu biiray Musharixiinta Galmudug , isla markaana uu u daneynayo qabashada xilkaas ayaa lagu sheegay inuu doonayo in hadii uu qabto hogaanka Galmudug uu mucaarad ku noqdo madaxweyne Farmaajo oo balantii uu la galay uga baxay .
Farmaajo ayaa codadkii ugu badnaa ee uu ugu guuleystay doorahsad madaxweynaha Soomaaliya wuxuu ka helay Xisbiga Daljir ee Xildhibaan Axmed Macalin , hayeeshee daljir ayaa layaab waxay ku noqotay markii ay iska dhex waayeen golaha wasiirada Soomaaliya taas oo caro ku abuurtay xildhibaan Fiqi.
Fiqi ayaa dadaal xoogan ugu jira sidii uu u qaban lahaa xilka madaxweynaha galmudug , isagoo hore ugu guuldareystay inuu xilkan qabto kadib tartan uu la galay madxaweynii xilka galmudug isla casilay ee C/kariin Xuseen Guuleed.
Hadii xildhibaan fiqi uu qabto xilka madaxweynaha Galmudug , waxaa la sheegayaa inuu galmudug ka dhigi doono maamul goboleed mucaarad ku ah dowlada Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
Farmaajo ayaa ka feejignaan doonaa in xilka higaanka Galmudug uu qabti Xildhibaan Axmed Macakin Fiqi oo uu ka reebay inuu kasoo muuqdo dowladiisa .